Barnaamijka Online CEC - Kulliyadaha Hore ee Colorado
Waan ku faraxsanahay oo waan ku faraxsanahay Barnaamijkeena Online CEC wuu socdaa! Ardayda diiwaangashan iyo qoysaskooda, fadlan u gal boggan macluumaadka Barnaamijka CEC Online.
Ardayda iyo Qoysaska Barnaamijka CEC Online. Guji badhanka galitaanka ee hoose si aad u gasho madal onlayn ah Spark Education adoo adeegsanaya Magacaaga iyo Furahaaga.
Gelitaanka Dabaqa Dabaqa
Haddii aan lagu siinin Username iyo Password, fadlan Riix halkan si loo ogeysiiyo shaqaalaheena taageerada.
Qiimaynta Farsamada CEC
Fadlan dhammaystir Qiimayntayada Teknolojiyadda si aan u hubinno inaad haysato qalab iyo aqoon ku habboon oo kuu dejisa guusha internetka!
Aad Qiimaynta Farsamada!
Tom Smith - Agaasimaha Fulinta Waxbarashada Online
Buugga A Kulan
Nagala soco xagga Bulshada si aad ugu xirnaato CEC. Soo dejiso barnaamijka Infinite Campus ee bilaashka ah si aad u hesho warar iyo warar.
La kulan Macallin
Isku qor CEC
“Helitaanka taageero la’aan fursad ma aha.” - Vincent Tinto
Kooxdayada Hogaaminta ee Barnaamijka CEC Online waxay aqoonsan yihiin mas'uuliyadda naloo dhiibay si aan u gaarsiinno saameyn togan oo nolosha ah ardaydeena iyo qoysaskooda, tacliin ahaan iyo noloshooda labadaba. Xubin kastaa wuu fahmaa oo la qaybsadaa dhammaystirka Qoraalka Himilada CEC iyadoo la isticmaalayo agab kasta oo suurtagal ah iyo in la dhiso arday xooggan oo online ah oo ay ka buuxdo xamaasad oo ay hogaaminayso heer sare.
Kooxda Hoggaaminta Barnaamijka Online CEC
Tom Smith - Agaasimaha Fulinta Waxbarashada Online- View Profile
Cody Whetstone - Hormuudka Tacliinta - View Profile
Shaqaalaha Taageerada Barnaamijka Online CEC
Gretchen Buhrke - Isuduwaha Farsamada Online - View Profile
Maggie Crulo - Isuduwaha Taageerada Ardayga - View Profile
Sarah Whetstone - Diiwaanhaye - View Profile
Waxaan fahamsanahay in raadinta iskuulka saxda ah uu yahay waayo -aragnimo shaqsiyeed iyo in habka oggolaanshaha inta badan ay noqon karto mid cabsi leh oo ay adag tahay in la raaco. Shaqaalaheena Ogolaanshaha waxay u heellan yihiin inay qoysaska ka caawiyaan inay fahmaan habsocodkeena iyo inay taageero ka siiyaan go'aankaaga hore si aad u codsato isqorista ilaa laga gaadhayo kal -fadhigaaga la -talinta koowaad.
Kooxda Ogolaanshaha Barnaamijka Online CEC
Shaqaalahayaga la -talinta waxay ku dadaalaan inay fahmaan oo xushmeeyaan gaar ahaanshaha arday kasta iyo ujeedooyinkooda waxbarasho. Waxay aqoonsadaan in dugsiga dhexe iyo dugsiga sare ay yihiin waqti sahamin iyo in danaha iyo himilooyinka ardaydu si dhakhso ah isu beddeli karaan. Wacyigelintani waxay wadashaqayn la yeelanaysaa arday kasta si loo abuuro Xirfad Shaqsi iyo Qorshe Waxbarasho (ICAP) oo la jaan qaada hadafyadooda waxbarasho, danahooda shaqo, iyo kartidooda.
Kooxda La -talinta Barnaamijka CEC Online
Jeremiah Dukes - La -taliye - Mentor - View Profile
CEC iyo la -hawlgalayaasheena kulliyadda ee la aqoonsan yahay waxaa ka go'an inay abuuraan bulsho bartayaal noloshooda ah iyo dhaqanka dugsiga oo kobcinaya guusha waxbarasho iyo tan shaqsiyeed ee arday kasta. Hadday yihiin kuwo tacliin ahaan hore u socda, oo ku socda waddada saxda ah, ama ka hooseysa heerka fasalka - barnaamijyadeenna waxaa loogu talagalay inay u diyaariyaan ardayda heerarka kala duwan koorsada kulliyadda sida ugu dhakhsaha badan uguna waxtar badan. Waxaan sameynaa dadaal kasta si aan u bixino taageerada ugu sarreysa ee ku hagidda ardayda xagga yoolalkooda iyo inaan ka caawino sidii ay ku gaari lahaayeen himilooyinkaas ballanqaad, shaqo adag, iyo isla xisaabtan.
Kooxda Tacliinta Barnaamijka CEC Online
Martin Carney- Macallinka Farshaxanka Luuqadda / Hoggaamiyaha Aadanaha- View Profile
Sean Clason - Macalinka Cilmiga Bulshada - View Profile
Zach Hunt - Macalinka Farshaxanka Luuqada - View Profile
Sam Kloeckner - Macalin Spanish - View Profile
Teresa Suarez - Macallinka Xisaabta / Hogaanka Xisaabta iyo Sayniska - View Profile
Ma rabtaa inaad waxbadan baratid si aad u hubiso in Barnaamijka CEC Online uu ku habboon yahay qoyskaaga? Ka qaybgal mid ka mid ah kulankeena xog -ogaalka ah. Kooxdayada hoggaanka ayaa soo bandhigaysa barnaamijyadeenna, shaqaalaha, dhaqanka annaguna waxaan u joognaa inaan ka jawaabno wixii su'aalo ah ee aad qabtid. Dooro taariikh hoos ku qoran iyo RSVP maanta!
CEC News Agagaarka Dugsiyadeena